Ka-qaybgalka qoyska, bulshada iyo dugsiga oo xoog leh ayaa fure u ah wanaagga ardayda iyo guud ahaan guusha ardayda. Dugsiyada Minnetonka waxay qiimeeyaan iskaashigeenna waalidnimo waxayna siisaa taageero iyo kooxo ballaadhan degmada iyada oo lala xiriirinayo bulshada dugsiga iyo waalidiinta kale, wax laga barto dadaallada waxbarashada iyo taageerada la heli karo ee ardayda iyo qoysaska. Waxaan ognahay in marka iskuullada, waalidiinta iyo qoysasku ay wada shaqeeyaan si ay u taageeraan ardayda, wanaagga ardaygu wuu ka weynaanayaa.
Guddiga Waxbarashada Waalidka Minnetonka
Minnetonka Public School District Degmada Waxbarashada Bulshada
Wada Shaqeynta Qoyska Minnetonka
Dugsi kasta oo hoose iyo dhexe wuxuu leeyahay koox waalid.
Nadiifi Springs PTO
Muuqaallo dhaadheer PTA
Naadiyada Buusarka MHS
Guddiga Waxbarshada Waalidka ee Minnetonka (Waalidka oo Ujeeddo leh) wuxuu ka kooban yahay wakiil ka socda dugsi kasta PTO / PTA ama Kooxda La-talinta iyo sidoo kale wakiillada degmada dugsiga. Kooxda waxay u shaqeysaa si iskaashi iyo is afgarad ah si loo go'aamiyo, loo qorsheeyo, loona fuliyo fursadaha waxbarashada waalidka. Waalidiinta bulshadeenna waxay u ooman yihiin fursado ay ku bartaan sida ugu wanaagsan ee loo taageero loona koriyo carruur caafimaad qabta, mas'uul ah oo faraxsan. Isku darka dadaallada, keenista khubaro, iyo xulashada buugaagta taageeraya barashada socota, guddigan wuxuu keenayaa marin u helka macluumaadka waalidnimada oo tayo sare leh, si hufan oo qiimo jaban leh. Laga soo bilaabo sanadkii hore waxaan si dhow ula shaqeynay Tonka Cares iyo guddi hoosaadkooda cusub ee caafimaadka maskaxda si ay gacan uga geystaan go'aaminta meelaha laga hadlayo.
Wixii macluumaad ah ee ku saabsan ku hadla soo socda soo booqo boggayaga internetka .
Waxbarshada Beesha Minnetonka waxay taageertaa baahiyaha waxbarasho, bulsho iyo madadaalo ee bulshada iyadoo u adeegta carruurta da'doodu tahay dhalashada ilaa shan jirka, dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee ku nool Degmada Dugsiga Minnetonka iyo bulshooyinka ku xeeran. Waxaan aaminsanahay barashada nolosha oo dhan ee loogu talagalay dadka oo dhan, dhalashada ilaa qaan-gaarnimada iyo iskaashiyo taageera oo xoojiya bulshada, dugsiyada iyo qoysaska.
Booqo websaydhka Waxbarashada Bulshada .
SEAC (oo loogu dhawaaqo "doon") waa soo gaabinta Golaha La-talinta Waxbarashada Gaarka ah, oo ah koox siisa talooyin ku saabsan arrimaha waxbarashada gaarka ah degmadooda dugsi. Ujeeddadeedu waa la talin iyo u doodid, ee ma aha go'aan ka gaarista siyaasad. Sharciga Minnesota wuxuu farayaa degmo kasta oo ka mid ah gobolka inay yeelato SEAC inkasta oo uusan qeexin sida kooxaha loo abaabulayo ama waajibaadka ay tahay inay qabtaan. SEAC-yada maxalliga ahi waxay kula taliyaan degmooyinka dugsiga horumarinta barnaamijyada iyo adeegyada si loo daboolo baahiyaha waxbarasho ee gaarka ah ee carruurta iyo qoysaska. Iyagoo la wadaagaya aragtidooda gaarka ah ee waxa u eg isticmaalka adeegyadan, waalidiintu waxay ka caawin karaan degmada inay waxtar badan yeelato. Natiija ahaan, natiijooyinka carruurta naafada ah waa inay hagaagaan. Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ee SEAC ujeeddadeedu waa inay siiso waxbarasho iyo taageero dhammaan qoysaska leh carruurta leh baahiyaha gaarka ah, iyadoo la siinayo fursado xiriir.
Macluumaadka ku saabsan SEAC booqo websaydhka Waxbarashada Gaarka ah ee Minnetonka .
Ujeedada Iskaashatada Qoyska ee Minnetonka waa in la taageero lana horumariyo ladnaanta dhammaan dhalinyarada iyo qoysaska ku nool Degmada Dugsiga Minnetonka iyada oo lala kaashanayo bulshada. Wada-hawlgalayaasha Iskaashatada Qoyska ee Minnetonka ayaa isku uruursada sannad dugsiyeedka oo dhan si ay ula wadaagaan macluumaadka la xiriira barnaamijyada, ilaha bulshada, iyo inay raadiyaan fursado ay ku taageeraan qoysaska iyo fursadaha kale ee gacan ka geysanaya horumarinta bulshada. Iskaashatada Qoyska ee Minnetonka waxay kobcisaa habab wada shaqeyn waxayna keentaa aragtida, macluumaadka iyo ilaha wada-hawlgalayaasha kala duwan iyo degmooyin si loo abuuro xalalka farqiga adeegga, isku-dubbaridka adeegga iyo baahiyaha aan la daboolin ee qoysaska bulshada.
Booqo shabakadda Iskaashiga Qoyska ee Minnetonka .
Tonka CARES waa isbahaysi diiradda saaraya ka hortagga oo ka kooban 50+ xubnood oo matalaya qaybaha kala duwan ee bulshada. Tonka CARES wuxuu la shaqeeyaa sharci fulinta maxalliga ah, ganacsiyada, dowladda hoose, Dugsiyada Dadweynaha ee Minnetonka, kuwa aan macaash doonka ahayn ee taageera dhallinyarada, bulshooyinka caqiidada leh, ardayda iyo waalidiinta si loo abuuro bulsho caafimaad qabta iyo jawi taageeraya go'aan qaadashada wanaagsan ee dhallinyarada. Ujeeddada 'Tonka CARES' waa inay bixiso isbahaysi bulsho oo kala duwan oo kobciya horumarka caafimaadka leh ee dhalinyarada, oo ay ku jiraan ka hortagga isticmaalka mukhaadaraadka iyo ka hortagga hore.
Booqo websaydhka 'Tonka CARES' .